Tajikistan: Ny fotoanan’ny Ranomandry. Izao · Global Voices teny Malagasy
Tajikistan: Ny fotoanan'ny Ranomandry. Izao
Voadika ny 02 Avrily 2018 14:12 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Na natomboka aza ilay tobina tohodrano Sangtuda-1 fakàna herinaratra efa nandrasana ela tao Tajikistan, tsy mbola mahatsapa fiovana ny mponina. Tsara ho lazaina fa ilay kodiaramilina voalohany (amin'ny efatra) ihany no natomboka niasa ary ireo telo sisa kosa dia ho amin'ny faran'ny taona 2008. Na teo aza ireo fampanantenana nataon'ireo mpahay toetrandro teo an-toerana, izay naminany fa hiala ao Tajikistan ny andro mangatsiaka ato anatin'ny andro maromaro, mbola 16-20 degre (Celsius) ambanin'ny aotra ihany ny maripàna.
Ankoatr'izany, mbola misy foana ny krizin'angovo eto ary miharatsy andro aman'alina, hoy i kellyinthemountains. Mbola mangatsiaka sy maizina avoakoa ireo efitrano fonenana, fianarana, birao. Tany amin'ny biraony sy ny tranony , nanery ny olona hanao akanjo fitondra any ivelany ny maripàna ambany:
Nidina ambanin'ny -20 degre Celsius ny maripàna ao Tajikistan sy any amin'ny toerana hafa ao Azia afovoany. Nakorontan'ny orampanàla mavesatra sy fihotsahanà orampanala ny fitateram-bahoaka tany amin'ny tanàna sy vohitra maro. Nasain'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka sasany izay mahery fo loatra handeha amin'ny lalàna mivaingana avo roa henin'ny vidin'ny tapakila no nampandoaviny ireo mpandeha.
Fanampin'izany, mahatonga ny fianarana any amin'ny ambaratonga faharoa ho tsy hisy mihitsy ny tsy fisian'ny fitaovana fanafanàna ao amin'ny tanàna sy ny fahakelezan'ny famatsiana herinaratra — notapahana teo amin'ny 45 ka hatramin'ny 30 minitra teo izy ireo. Mipetraka any amin'ny efitrano fianarana amin'ny palitao sy arotenda ireo mpampianatra sy mpianatra.
Satria toy ny tsy mihamalefaka ny ririnina, tsy mihatsara ny toedraharaha, mitatitra i neweurasia:
Ho fanampian'ny krizin'angovo misy ankehitriny, nampiakarina 20 isanjatony ny vidin'ny herinaratra ary efa ho 50 isanjatony ho an'ny entona. Mandritra ny fotoan-dririnina no isehoan'izany rehefa miatrika tsy fahampian'angovo mba hamanàna ny tranony sy hahandroana sakafo ny mponina. Ireo orinasa mibodo ny angovo eo an-toerana, TojikGaz (entona natioraly) sy ny Barqi Tojik (herinaratra), no nanao ilay fanambarana momba ny fiakaran'ny vidin'ny herinaratra sy entona.
Na voararan'ny lalàna aza ny manapaka herinaratra amin'ny toerana toy ny hopitaly, voahitsakitsaka isanandro izany lalàna izany ary misy fiantraikany mahatsiravina maro. Vao haingana, enina ny zaza vao teraka no maty tao amin'ny hopitalin'i Dushanbe. Mitatitra ireo media ao an-toerana fa ny antony fototra nahatonga ireo fahafatesana ireo dia ny fahatapahan'ny herinaratra teny amin'ny hopitaly fiterahana.
Tsy ampy na dia ho ho an'ny jiroeny an-dalana aza ny herinaratra vokarina ao amin'ny firenena. Milaza i Khurshed fa mahatonga ny mpamily hanao lozam-pamoivoizana matetika kokoa ny làlana maizina [ru].
Efa ho herinandro izao no tapaka ny jiro eny an-dàlana ao Dushanbe ary niakatra be ny isan'ireo lozam-pifamoivoizana.
Androany, nitatitra ireo masoivohom-baovao Tajik fa baikon'ny fanjakana ny hoe hidina hatramin'ny faran'ny volana Janoary avokoa ireo orinasan-taozavatra, orinasa sy ny indostria hafa mba hitsitsiana angovo. Omaly, nitatitra ny lehiben'ilay orinasan'angovo lehibe ”Barki Tojik” (herinaratra) fa haingana be ny fihenàn'ny haavon'ny rano ao amin'ny tahirin-dranon'i Nurek. Manome rano ilay tobina tohodrano fakàna herinaratra ao Nurek, izay miteraka eo amin'ny 80 isanjaton'ny herinaratra ao amin'ny firenena ity tahirin-drano ity. Milaza ny “Barki Tojik” fa raha tsy hihena ny fampiasana herinaratra, tsy ho ampy intsony hatramin'ny Febroary mba hamokarana herinaratra ny rano ao amin'ilay tahirin-drano.
20 ora izayZeorzia